सम्वृद्ध नगर बनाउन मेरो उम्मेदवारी |
सम्वृद्ध नगर बनाउन मेरो उम्मेदवारी
प्रकाशित मिति :2017-05-10 10:54:07
नेकपा एमालेका तर्फवाट वनेपा नगरपालीका लागि मेयर पदका प्रत्यासी उम्मेदवार लक्ष्मि नर सिं बादेको जन्म बुवा सुर्यबहादुर श्रेष्ठ र आमा तुईमायाँ बादे श्रेष्ठको कोख वाट वि. सं. १०९९ साल कात्तिक २३ गते बनेपामा भएको हो । संचय कोषमा सह ईन्चार्ज देखि नेपाल प्रहरीमा ठानेदार हुँदै एसएसपीसम्म गरी ३२ बर्ष जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका ब्यक्ति हुन् ।
बनेपा नव लक्ष्मी सहकारी संस्थाको अध्यक्ष र सेतु गणेश समूहका अधध्क्ष समेत रहेका वादे यस अघि साविक बनेपा नगरपालिकाका पूर्व उप मेयर समेत हुन् । नेकपा एमालेबाट सर्वसम्मत उम्मेदवारीको रुपमा मेयरको टिकट पाए सँगै अन्य दलहरुले समेत आफ्नो उम्मेदवार ठेगान गर्न सकिरहेका छैनन् । अत्यन्त सरल र सिधास्वभावका वादेको लामो समय नेपाल प्रहरी र प्रशासनिक अनुभव छ । बादेको बनेपा नगरपालिकाको मेयर पदको घोषणासँगै उनीसँग नव क्षितिज साप्ताहिका लागि दिनेश घिमिरेले लिनु भएको अन्तर्वाताको सार संक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ :
राजनीतिमा कसरी लाग्नु भयो ?
सानो देखि नै राजनीतिमा चासो थियो । सानो उमेरमा पनि बाल्यकालमा चोर पुलुस खुब खेलिन्थ्यो । खेल खेल्दा जहिले पनि म पुलिस बनेर खेल्थे । ३२ बर्ष नेपाल प्रहरीको जागीरे जीवन गरी जब एसएसपी हुँदै रिटार्यड भएँ त्यस पछि समाज सेवा गर्ने रहर पुरा गर्न राजनीतिमा होमिएँ । शरिर मेशिन हो यसलाई स्वस्थ राख्न सकियो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । स्वस्थ राख्नका लागि मानसिक र शारिरिक ब्यायाम गर्नु पर्ने हुन्छ नत्र भने जसरी मेसिन नचल्दा खिया लागेर सकिन्छ त्यसै गरी दिमागलाई व्यस्थ राख्न सकिएन भने खिया लाग्छ त्यही भएर रिटार्यड जीवनलाई सार्थक बनाउन समाज सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ म राजनीतिमा होमिएको हुँ ।
मेयरको टिकट सर्वसम्वत रुपमा पाउनु भो के छन् योजना ?
नेकपा एमालेलाई एकमन्ना एकताका साथ अगाडी बढाउनु मेरो उदेश्य हो । अझ मेरो सपना भनेको बनेपा नगरलाई धुँवा धुलो र ध्वनीबाट मुक्त गरी समुन्नत नगरको रुपममा विकास गराउनु हो । पार्टीले मलाई जिल्ला कमिटी र क्षेत्रिय कमिटीमा रहेर काम गर्न धेरै अनुरोध गरेको हो तर मैले मेरो सपना भनेको बनेपा नगरलाई आर्थिक, साँस्कृतिक, पर्यटकिय हिसाबले उन्नत बनाउनु हो भनेर पटक पटक भने र त्यसैका लागि माथिल्लो पदको लोभ नगरी बनेपा नगर कमिटिकै अध्यक्ष बनेर बसे जसका कारण पनि मलाइ पार्टी, पार्टी कार्यकर्ता र शुभ चिन्तकबाट मेयर पदका रुपमा आउन सदा सहायता रह्यो । त्यसकारण पनि होला मलाई पार्टीले नगरको प्रमुख पदका लागि योग्य ठान्यो जस्तो लाग्छ ।
हाम्रो सपना भनेको नगरलाई समुन्नत नगर बनाउनु हो, नगर भित्र देखिएका विसंगति र विकृतिको अन्त्य गर्नु हो, जनताको कर माथि भइरहेको भष्टाचारलाई अन्त्य गर्नु हो । बनेपा नगर भित्र देखिएको खानेपानीको हाहाकारलाई तत्काल अन्त्य गर्नु हो । बनेपामा देखिएको फोहर मैला व्यवस्थापन तत्काल ब्यवस्थापन गर्नु हो, आश्वासन हैन काम गरेर जनताको मन जित्नु हाम्रो प्राथमिकता हो यावत बनेपाको विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन पार्टी पक्तिले मलाई योग्य ठान्यो । पार्टी भित्र अन्य योग्य उम्मेदवार हुँदा हुँदै पनि पार्टीले मलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ पार्टी र पार्टी पक्क्तीको यो सपना पुरा गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो । आम नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकमन्ना एकताको साथ लाग्नु भएको छ । त्यसकारण यो सपना पुरा हुने देखिरहेको छु ।
एमालेको अवस्था कस्तो छ ?
तपाईहरुले देखि रहनु भएको छ अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेमा पार्टी प्रवेशको लहर चलिरहेको छ । विशेष गरी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरिएका काम र अडान देखेर आम जनमानस हामी प्रति आकर्षित भइरहेका छन् । भारतले नाकाबन्दी गर्दा हाम्रा अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री रहनु भएका केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडान र विकासको सपनालाई आम जनसमुदायले राम्रो सँग मुल्याङन गर्नु भएको छ ।
पार्टीले बृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला भत्ता, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था, स्थानिय निकायको विकासका लागि गाउँ गाउँमा बजेट विनियोजन लगायतका कामहरु र अवधारणा देखेर जनताको आकर्षण बढिरहेको छ । अझ मुलुकलाई पराधिन पार्न चाहने, मुलुको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि खेलबाड गर्न खोज्ने, यो मुलुकलाई भारतको औपनिवेशिक बनाउन चाहने र भर्खर जन्मिएको संविधानलाई सिध्याउन चाहने विदेशीहरुको चलखेललाई तोड्नका लागि देखाउनु भएको स्वाभिमान र मुलुकको विकासका लागि मुलुक भित्रै संभावना खोज्ने जुन साहस गर्नु भयो त्यो कदमको चौतर्फी स्वागत र सर्मथन भइरहेको छ ।
नेपालकै इतिहासमा आफ्नो कुराहरु लाद्न भारतले गरेको अत्याचारको चरम विन्दु नाकाबन्दी थियो उक्त नाकाबन्दीलाई शिर उठाएर एमाले नेतृत्व सरकारले विदेशीहरुलाई धुलो चटाएको कुराहरुबाट आम जनभानश एमालेप्रति आकर्षित छ । यो बाट पनि थाहा हुन्छ कि अब एमालेको विजयको अभियानलाई कोही कसैले कुर्नै भ्रम छर्दैमा रोक्न सक्दैन । एमाले नेतृत्वको सरकारको कामहरुबाट नै जनताले कुन पार्टी कस्तो मुल्याङन गरिरहनु भएको छ त्यसैले हाम्रो पार्टीको बर्तमान अवस्था एकदम राम्रो छ । अझ मेरो उम्मेदवारीले बनेपा नगरपालिकामा जुन आकर्षण देखिएको छ । म बाट आम नगरबाशीहरुले ठूलो आश गरिरहनु भएको छ । अहिले पार्टीप्रति देखिएको आकर्षण र बनेपा बासीहरुको सवृद्घ नगर बनाउने, भष्टचार शुन्य नगर बनाउने अभियानमा एमाले प्रति धेरै विस्वास गरिरहेको देखिरहेको छु ।
बनेपा नागरबासीले तपाँइबाट के अपेक्षा गरेका छन् ?
म मेयर भएपछि बनेपा बजारलाई व्यापारिक हबको रुपमा विकास गर्नेछु ।
विपि राजमार्ग र अरनिको राजमार्गका कारण हामीले बनेपा शहरमा व्यापार व्यवसाय र औधोगकि क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सक्छौ । बनेपालाई धुलो धुँवा र ध्वनी रहित सफा सुन्दर नगर बनाउन तत्काल कदम चालिने छ । बनेपा नगर वरपरका सुन्दर डाँडाहरुलाई पर्यटकिय हवको रुपमा विकास गरिने छ । अपाङ्ग माथिको डाँडालाई खुल्ला चिडियाखानाको रुपमा विकास गरिने छ । ढकाल गढेश माथिको डाँडामा ठूलो वुद्घको मुर्ति सहित पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने छ । नालालाई कृर्षि भूमि र उत्पादनका हिसाबले विकास गरिने छ ।
कृषिउपज सँगै कृषि पर्यटनका हिसाबले अगाडी बढाइने छ । नाला लगायतका क्षेत्रमा रहेका जंगलहरुमा जडीवुटी लगायतको खेति गराउन आवश्यक नीति, लगानी र वातावरण तयार पार्नेछु ।
प्रत्येक वडाहरुमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्थापना गरिने छ । सडक वरपर ग्रिन बेल्टको अवधारण लागु गरिने छ । बनेपामा देखिएको खानेपानीको समस्याको तत्काल समाधान गरिने छ । बनेपा नगरलाई सरसफाई र सुन्दर राख्नका लागि तत्काल व्यवस्थापन गरिने छ । नगर वरपरका डाँडाहरुमा भू टावर निर्माण गरिनेछ । नगर भित्र रहेका करोडौ खर्च गरिर बनाएका सूचना प्रविधि पार्क र बनेपा पोलिटेक्निकल इन्च्यिुटलाई नगरबासीहरुको पहुँचमा पु¥याइने छ ।
बनेपा नगरका ठाउँ ठाउँमा सुन्दर बगैचा सहितको पार्कहरु बनाइने छ । अब्यवस्थित पार्किङ हटाई व्यवस्थित पार्किङ स्थलहरु बनाउने छु । कर्मचारी वा जनप्रतिनीधि जो सुकैबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कार्वाही गरि भ्रष्टाचार शुन्य नगर विकास गराउने छु । बनेपा नगर भित्र औधोगिक कलकारखाना खोल्नका लागि कानूनी वातावरण सहित लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन पहल गर्ने छु ।
नालामा निर्माण कार्य रोकिएको सिदार्थ विस्वविद्याालय तत्काल वनाएर संसार भरका वौद्ध धर्मावालम्विलाई वनेपामा पढ्ने वातावरण मेरै कार्यकालमा वनाउने छु । साँगालाई विषेश पर्यटकिय नगरको रुपमा विकाश गर्ने छु । टुकुचा र उग्रचण्डीमा पर्ने वाँसुकिस्थानमा कृत्रिम ताल बनाई ढुंगा समेत चलाउन सकिने ताल निर्माण गर्नेछु । त्यहाँ जम्मा भएको पानिले नालाको उर्बर भुमिमा सिँचाई गरी उत्पादन वृद्दि गर्ने छु । रासायनिक विषादीहरुको न्युनिकरण गरी जैविक र अर्गानिक खेतिको विस्तार गर्नेछु ।
अर्गानिक खेतिको लागि प्रोत्साहन र लगानी बढाउने छु । उग्रचन्डि नाला र टुकुचा नालालाई कृषि पर्यटन र धार्मिक रुपमा अगाडि वढाईनेछ यस क्षेत्रमा कृषि विश्वविधालय वनाईने छ । यि क्षेत्रलाई लक्षित गरी सुबिधा सम्पन्न सामुदायिक हस्पिटल निमार्ण गरीने छ । साविकको उग्रतारा गा. वि. स.मा सुविधा संम्पनं खेल मैदान सहित स्टेरीयम बनाइने छ । धनेश्वर र चन्डेश्वरी मन्दिर वरपर वृहत गुरु योजना सहित धार्मिक र पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गरीने छ । नगरका केही क्षेत्रमा वृद्धा श्र्रम अपाङ्ग पुर्नस्थपना केन्द्र र स्तरीय पुस्तकालय विकास गरीने छ । बनेपा नगरको संस्कृति संरक्षणको लागि सास्कृतिक संग्रालयको निमार्ण गर्ने छु ।
न्युन आय आर्जन भएका विपन्न परिवारहरुलाई सिप सहितको रोजगारको ब्यवस्था गर्ने छु । नगरपालिका कै पहलमा प्रत्येक वडाहरुमा औद्योगिक कल कारखानाहरु निमार्ण गरीने छ र ती उधोगहरुमा विपन्न परीवारलाई प्राथामिकताका साथ रोजगारी प्रदान गरीने छ । प्रत्येक वडा पुर्ण सरसफाई र कालोपत्रे सडकले जोडिने छ । नगर भित्रका जगंलहरुमा व्यवस्थित वगैचा फलफुल तथा जडिवुटिको खेति गरीने छ भुकम्प पिडितहरुका लागि व्यवस्थित सामुहिक भवन निमार्ण गरीने छ । सुचना र प्रविधि मैत्रि नगर वनाईने छ नगरका विविध क्षेत्रहरुमा सिसि टिभिको निगरानीमा राखि अपराध न्युनिकरण गरीने छ । सडकमा सडक बत्तिहरु राखिने छ । अब्यवस्थित तारहरुलाई व्यवस्थित गर्नेछु । प्रत्येक आयोजनाहरुमा नगर वासिको सल्लाह सुझाव र सकृय सहभागिताको वातावरण वनाउने छु । नगरलाई व्यवस्थित विकशित नगर बनाउन विविध आयोजनाहरु संचालन गरिने छ ।
अन्त्यमा आम नगरबासीहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
बनेपा नगरमा चाहिने सबै पुर्वाधारहरु छन् कुशल नेतृत्व र योजनाकार भए नगरलाइृ सम्बृद्घ बनाउन समय लाग्ने छैन त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा भ्रष्टाचार विरोधी, नगर प्रेमी, विकासवादी नेतृत्व चयन गरौ. त्यसका लागि नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु सक्षम छन् म नगरबासीहरुका दुख पिडा र सपनालाई पुरा गर्न चुनावी मैदानमा उत्रिएको छु यसका लागि आम नगरबासीबाट साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त होस् भन्दै लक्ष्मी नरसिंह वादे हरेक नगरवासीको सपना पुरा गराउने पात्र बन्नेछ ।